युवा पंक्तिलाई सतर्क रहन डा. बाबुराम भट्टराईको सुझाव - Baikalpikkhabar
युवा पंक्तिलाई सतर्क रहन डा. बाबुराम भट्टराईको सुझाव
१२ श्रावण, काठमाडौँ / पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्रविरूद्ध धूप हाल्नेहरू राजतन्त्रका भूतमात्र भएको बताएका छन् ।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्तावको जवाफमा डा. भट्टराईले गणतन्त्रविरूद्ध धूप हाल्नेहरू राजतन्त्रका भूतमात्र भएको बताएका हुन् ।
‘झिंगाको सरापले डिंगा मर्दैन । कसैले चर्चा बटुल्न जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीविरूद्ध बोल्यो भन्दैमा तरंगित हुनपर्दैन,’ डा. भट्टराईले ट्वीटमा भनेका छन्,’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध धूप हाल्नेहरू राजतन्त्रका भूतमात्र हुन् भन्न डराउनुपर्दैन ।
बरू वैकल्पिक राजनीतिको सपना बोकेका युवा सतर्क रहून् ।’ मिश्रको उक्त प्रस्तावमा विवेकशील साझा पार्टीकै नेताहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मङ्गलबार, १२ साउन, २०७८, बिहानको ०९:१२ बजे